Ukuphupha ngeKhaya Discover ➡ Discover Online ▷ ➡️
Igama "ikhaya" ngokubanzi linxulunyaniswa nokhuseleko, ukufudumala, kunye nokhuseleko, amagama achaza imvakalelo. Ukuhlala kwiindonga zakho ezine kuyinjongo efanelekileyo ebomini, kwaye nje ukuba kusekwe, ukufudukela kwindlu entsha akusoloko kulula.
Sihlala sinxulumana nekhaya kunye nedolophu umntu akhulele kuyo. Abantu abaninzi baphupha ngokuba nomzi. Xa ehamba, maxa wambi uziva ekhumbula ekhaya; Iimpawu zokugoduka: Ndizakulunga okomzuzwana. Indawo enekhaya ithetha intuthuzelo. Ayenzeki ngamabona-ndenzile ukuba onke la magama aneengcambu ezifanayo.
Isiseko seemvakalelo ezilungileyo malunga nekhaya senziwe ebuntwaneni. Abantu abaninzi bakhumbula ngothando igumbi labantwana babo, isidlo sangokuhlwa kunye, okanye amasiko osapho. Kulabo baziva bekhuselekile kumakhaya abazali babo, ikhaya liyakuhlala liyindawo abathanda ukuyindwendwela. Isakhiwo akhulele kuso umntu sinxulunyaniswa neemvakalelo ezintle ebuntwaneni obonwabileyo, uneemvakalelo ezichaseneyo kwimeko yamava amabi. Nditsho noloyiko kunye noloyiko olunokoyisa nabantu abadala xa kufuneka bethathe inyathelo lokubuyela kwikhaya labo elidala, apho kwenzeka khona iziganeko ezihlasimlis 'umzimba.
Ikhaya linamagama amaninzi: abantu abancinci, ngakumbi, babiza indawo yokuhlala, ubukhulu becala incinci, indawo yabo yokuhlala okanye indlu yabo. Izityebi zinendawo yokuhlala, abezopolitiko abaphezulu bahlala; Abantu abangenamali abahlala ezitalatweni, kwelinye icala, bafuna indawo elula engenabungozi okanye indawo yokulala ubusuku bonke. Onke la makhaya anokuba likhaya, ngaphezulu okanye ngaphantsi indawo yempilo-ntle kwaye anike umbono wonxibelelwano.
Ikhaya linokuba liziko labantu abafuna uncedo: abantwana bahlala kumakhaya abantwana, abantu abadala kumakhaya abalupheleyo, izilwanyana zasekhaya kumakhaya ezilwanyana. Ihostele ikwalikhaya apho abahambi banokuchitha ubusuku ngexabiso eliphantsi. Ukongeza, iiklabhu zazo zonke iintlobo zihlala zikhangela indawo yokudibana kunye nokurenta okanye ukwakha indlu yeqela.
Iphupha lendlu mhlawumbi libangela impilo-ntle ephupheni. Umoya wosapho uphumle kwaye uzolile. Ukutolikwa kwamaphupha, kubalulekile ukudibanisa iimvakalelo ezilungileyo nezingalunganga nekhaya lamaphupha.
Ukuba uphoswa yimeko yokuphupha kunye nekhaya ngengqondo yekhaya kwinqaku elilandelayo, jonga kwinqaku lethu kwigama elifanayo "indlu"!
Igama "ikhaya" lineentsingiselo ezininzi. Kuba ukutolikwa kwamaphupha kuxhomekeke kwimeko yamaphupha ngqo, qala ufunde ngemizekelo yamaphupha anomdla kunye neentsingiselo zawo:
1 Uphawu lwephupha «ikhaya»: eyona maphupha aqhelekileyo malunga nesimboli
1.1 Khaya: ngasekhaya nasekhaya ephupheni
1.1.1 Indlela eya ekhaya ephupheni: Ikhaya lodwa!
1.1.2 Ukubuyela ekhaya ephupheni: yonke into ekuqaleni
1.2 Ukungabi namakhaya ephupheni: ndingowaphi?
1.3 Ukuqhekeza ikhaya lakho ephupheni: uhlalutyo
1.4 Iphupha lokubhadula
1.5 Iphupha lomfazi ongenakhaya
2 Uphawu lwephupha «ikhaya» - ukutolikwa ngokubanzi
3 Uphawu lwephupha «ikhaya» - ukutolikwa kwengqondo
4 Uphawu lwephupha «ikhaya» - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «ikhaya»: eyona maphupha aqhelekileyo malunga nesimboli
Khaya: ngasekhaya nasekhaya ephupheni
Indlela eya ekhaya ephupheni: Ikhaya lodwa!
Nabani na ophupha ngokuza ekhaya ulangazelela utshintsho ekhayeni lakhe. Oku akuthethi ukuba ufudukela kwesinye isixeko. Ukuhlaziya indawo yokuhlala okanye ukujonga ngabom iindawo ezingaqhelekanga kwindawo ahlala kuyo kuhlala kunceda.
Ukubuyela ekhaya ephupheni: yonke into ekuqaleni
Nabani na obuyela ekhaya ephupheni uhlala elangazelela ukhuseleko noxolo ebomini bokuvuka. Uhlala uphantsi koxinzelelo olukhulu apha kwaye uzive uthintelwe luxanduva. Iphupha linika ithuba elihle lokuyeka uxanduva kwaye unakekele ngakumbi iimfuno zakho kwakhona.
Ukungabi namakhaya ephupheni: ndingowaphi?
Ukuba iphupha liziva lishiyiwe kwaye lingenamakhaya, oku luphawu loloyiko lokuphulukana. Kwiimeko ezininzi, kukho ikhaya elikhuselekileyo apha el mundo yomlindo. Ke ngoko, uloyiko lokuphulukana nokhuseleko lukhulu ngakumbi. Nangona kunjalo, ngenxa yokulala, akukho mngcipheko ukwanda koku.
Ukuqhekeza ikhaya lakho ephupheni: uhlalutyo
Ukuba umntu uphupha ukuba kungene umntu endlwini yakhe, amaphupha kwihlabathi elivukayo ahlala esoyika ukwehla kwezentlalo. Uyazingca ngempumelelo yakho oyisebenzele nzima kwaye ufuna ukwabelana ngayo nomhlaba ongaphandle. Iphupha lokuphangwa kwendlu kwaye ngakumbi ukulahleka kwezinto zomdla kufuneka liqondwe njengesikhumbuzo sokuthozama ngakumbi.
Nabani na ophupha umntu ongenakhaya uhlala esoyika ubunzima bezezimali kwihlabathi elivukayo. Le nkxalabo ibandakanya ukuphulukana nemisebenzi okunokwenzeka kunye nokonyuka kwetyala. Amava afana nephupha nendoda engenakhaya ngokuqinisekileyo akhokelela kukhathalelo olukhulu ekujonganeni nemali yomntu.
Iphupha lomfazi ongenakhaya
Iphupha lomfazi ongenakhaya libonisa uloyiko lokuwohloka kwezentlalo. Ukuphupha woyika ikakhulu ukulahleka kwabahlobo abanempembelelo kunye nabantu obaziyo kwilizwe elivukayo. Umphuphi kufuneka ajonge ukuba wenza ukuzithemba kwakhe kuxhomekeke kubantu abaphumeleleyo abamngqongileyo.
Uphawu lwephupha «ikhaya» - ukutolikwa ngokubanzi
Uphawu lwephupha "ikhaya" lifanekisela ukutolikwa kwamaphupha. uxolo lwangaphakathi. Ukuba umntu ophuphayo uyayamkela eyakhe indlu kwindawo yokuhlala amaphupha kwaye uziva ekhululekile apho, luphawu lokuba wanelisekile yena kunye nobomi bakhe.
Ukubuyela kwindlu okanye indlu apho iphupha lalisekhaya lithembisa iindaba ezimnandi. Kwinto ebizwa ngokuba "liphupha eliphikisayo," uphawu lwephupha lubhengeza ilahleko ngokwemiqathango yeshishini ukuba indlu ihonjisiwe okanye yahlaziywa ephupheni.
Kwinkcazo edumileyo yamaphupha, ukuba nendlu okanye indawo yokuhlala Impilo, ithamsanqa y YeNtlalontle. Ukuba ubona indlu yakho yakudala ephupheni ukwimeko yokungahoywa neyonakeleyo, uphawu lwephupha lumkisa ngokugula okanye ukufa okunokwenzeka, kwaye, ngokubanzi, ukuphulukana nabantu obathandayo. Ukuba umfazi osemncinci uphupha ukuba unikezele ngendlu yakhe okanye indawo yakhe yokuhlala, oku kubonisa ukwehla kwentlonipho kwiqabane elinothando.
Ikhaya labantwana njengomfanekiso wephupha libonisa imvakalelo yomphuphi yokungabaluleki. Abantu abadala ababonakala ephupheni kwikhaya lomhlalaphantsi babonakalisa isigaba sokugqibela. Oku kuthetha ukuba umba unokumakishwa, iprojekthi inokugqitywa. Nabani na ohlala ephupha ngendlu yomhlala-phantsi enamaxhego namaxhegwazana ukhathazekile ukuba akazokwazi ukuyenza ngexesha.
Igumbi lokulala okanye isikolo ekuhlalwa kuso sinokubhekisa kwiingxaki kwicandelo lobuchule njengophawu lwephupha.
Uphawu lwephupha «ikhaya» - ukutolikwa kwengqondo
Kwisimboli sephupha "ikhaya," umnqweno wephupha ubonakaliswa kwinqanaba lengqondo. elidlulileyo ngaphandle. Abantu abadala, ngakumbi, bahlala befumana iphupha lokuhlangana kwakhona kunye nendlu abakhulele kuyo. Ngokukodwa xa iphupha lalinobuntwana obonwabileyo, imvakalelo yoku izinto y ukukhuseleka ngokweemvakalelo.
Uphawu lwephupha "ikhaya" linokufihla isicelo esisezantsi sokubonisa amaxabiso asisiseko awasasazwa kuwe kwakudala kwaye uzithobe kwiimpembelelo zakho kubo.
Ukutolikwa kwamaphupha kukwathatha isigqibo kwimeko ekuyo iphupha elo. Ukuba ayihlambulukanga okanye ifanitshala ilahlekile kumagumbi, eneneni elilelo, uphawu lwephupha "ikhaya" linokubhekisa kwelinye. Ingxaki yesinyithi Iingoma. I-psyche ayikho ibhalansi, i-subconscious ithumela imiqondiso ephupheni ukuqonda ubunzima kunye nokuzilungisa.
Ukuba upeyinta eyakho indlu, bonisa umnqweno wakho. utshintsho ngaphandle.
Uphawu lwephupha «ikhaya» - ukutolika kokomoya
Kwinqanaba lokomoya, uphawu lwephupha "ikhaya" lifanekisela indawo yokhuseleko kunye nokhuseleko kutoliko lwamaphupha. Yintoni emele indawo engcwele, apho iphupha lakho lingenakho ukwesaba.
Iphupha malunga noFest
Ukuphupha ucula kumgca we-zip